यसपाली विद्युत् उत्पादन झनै घट्ने, कतै लोडसेडिंगको संकेत त होईन ? - samayapost.com
मंगलबार, ६ फागुन २०७६
यसपाली विद्युत् उत्पादन झनै घट्ने, कतै लोडसेडिंगको संकेत त होईन ?
समयपोष्ट २०७४ माघ ११ गते ५:४९
हिउँदयाम लागेसँगै खोलानालामा पानीको बहाव घट्दै जाँदा विद्युत् उत्पादन आधा घटेको छ ।
वर्षायाममा काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनको सवस्टेसन गोदकबाट ७१ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा प्रवाह भएकामा माघको पहिलो सातामा २७ मेगावाटभन्दा कम मात्र विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ ।
चैत्र÷वैशाखसम्म खोलामा पानीको सतह अझ घट्ने भएकाले विद्युत् उत्पादन पनि घट्न सक्ने विद्युत् उत्पादन गृहले जनाएको छ ।
इलाम जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षमताको सानिमा माई हाइड्रोपावर आयोजनाले १० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको सवस्टेसनले जनाएको छ । उक्त हाइड्रोपावर आयोजनाले वर्षायाममा ३० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको थियो ।
१८ मेगावाट क्षमताको अपरमाई हाइड्रोपावरका दुवै विद्युत् गृहबाट हाल ६.१८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । पाँच मेगावाट क्षमताको जोगमाई हाईड्रोले दुई हजार ५०० किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । इलाम पुवाखोला आयोजनाबाट तीन दशमलव १५ मेगावाट उत्पादन भइरहेको उक्त आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
इलामका मात्र होइन पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा निर्माण सम्पन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भने प्रशारण लाइन नहुँदा राष्ट्रिय प्रशारणमा कमै मात्र पुग्ने गरेको छ । केन्द्रीय प्रशारण लाइन नहुँदा हेवा खोलामा उत्पादित विद्युत् इलाम पाँचथर ३३ केभी प्रशारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ । ३३ केभी क्षमता नभएपछि न्यून मात्रामा विद्युत् केन्द्रीय प्रशारणमा जोडिएको हो ।
हेवाखोला, जोशी हाइड्रो र हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरबाट उत्पादित विद्युत् इलामको तिल्केनीस्थित सवस्टेसनमार्फत हाल करिब छ मेगावाट विद्युत् मात्र गोदक सवस्टेसनमा निर्यात भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इलामका प्रमुख रवीनबाबु घिमिरेले बताए ।
सुख्खायामको शुरूवातसँगै खेतबारीमा सिँचाइका लागि किसानले पानी लैजान थालेपछि उत्पादन घटेको आयोजना सञ्चालकहरू बताउँछन् । झण्डै पाँच महिनादेखि वर्षात् नभएकाले खोलामा पानीको सतह घट्दै जानु र किसानले बाली सिँचाइका लागि पानी लैजानाले उत्पादन घटेको हो ।
वर्षा नभए अझै उत्पादन घट्न सक्ने उत्पादन गृहले जनाएका छन् । धेरै सुख्खा भएको अवस्थामा अघिल्ला वर्षहरू भन्दा यसपाली अझ विद्युत् उत्पादन घट्ने भएको छ । सुरूङदेखि पावर हाउससम्म आउने पाइप लाइन छोटो भएकाले क्षमताअनुरूप विद्युत् निकाल्न धेरै पानी चाहिने भएकाले सुख्खा मौसममा उत्पादन घटेको कर्मचारी बताउँछन् ।
जिल्लाका ठूला जलविद्युत् आयोजनाका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित लघु जलविद्युत् आयोजनामा पनि विद्युत् उत्पादन घटेको छ ।
फाकफोक, एकतप्पा, आमचोक, फूएतप्पामा उत्पादन भइरहेका जलविद्युतमा पानीको बहाव घटेकाले विद्युत् उत्पादनसमेत घटेको फाकफोक खोला पहिलो लघु जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारी दिलेन्द्र मगरले बताए ।
कानून निर्माण गर्दैमा विधायकको जिम्मेवारी पूरा हुँदैनः अध्यक्ष तिमिल्सिना
सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक सदनमा पेश
वाइड बडी जहाजले नियमित उडान भर्दै
पूर्वी क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताको तयारी गर्दै नेपाल
मेगा बैंकलाई दोहा बैंकको २ अर्ब रुपैयाँ
अर्घाखाँचीमै पहिलो उपभोक्त समितिहरुलाई वडा कार्यलयमै योजना सम्झौता तथा बैंक खाता सन्चालनको ब्यवस्था
एभरेष्ट बैंकद्वारा निर्मित अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक शौचालय हस्तान्तरण
क्रिकेटर लामिछानेलाई सडकमा एक बालकले तपाईँ सन्दीप लामिछाने जस्तै देखिनुहुन्छ भनेपछि……
क्वारेन्टाइनमा नियम तोड्नेलाई महेन्द्रको पालाको कानुनअनुसार कारबाही